ဒါလေးလုပ်ပေးကြပါဦးဗျာ — MYSTERY ZILLION
January 2009 edited February 2009 in Networking
အခုက စက်တွေ အကုန်လုံးက Network က တက်တယ်ဗျ ... ကျွန်တော် သေချာသုံးပါမယ်ဆိုတဲ့ စက်မှာမှ Network က လုံး၀ကိုမရှိဘူးဗျာ ...အခုက Network Connections မှာ ဘာ Network တစ်လုံးမှကို မတွေ့တာဗျ ... ဘယ်လိုမှ Createanew connetion လုပ်လို့မရဘူး ... ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ .... Window လည်း ပြန်မတင်ချင်ဘူး .. (ပြန်တင်ရမှာ ပျင်းလို့ ..:D) လွယ်မယ်လို့တော့ ထင်ပါတယ် ... ကျွန်တော်ကလည်း တော်တော်လေးကို ပိန်းတဲ့ကောင်မို့လို့ပါဗျာ ... နည်းနည်းလောက်တော့ ဖြေရှင်းပေးကြပါဦးနော် ....
Network driver အလုပ်မလုပ်တာဒါမှမဟုတ်Network card မကောင်းတာလဲဖြစ်နိုင်တယ်Network card အသစ်တပ်ကြည့်ပေါ့
အခုက Network ကြိုးတပ်လိုက်ရင် မီးက နီနေတယ် ... မစိမ်းဘဲနဲ့ ... တခြားစက်တွေ အကုန်စမ်းပြီးပြီ ... Network အသစ်တင်လို့ရတယ် ... အဲဒီစက်တစ်လုံးပဲ ဘာမှကို လုပ်လို့မရတာ ...
Network setting တွေပြန်စစ်ပြီးပြီလား... (တစ်ခြားသူတစ်ဦးဦးကလိသွားတတ်တယ်)... ဖြစ်တာက အရင်ကောင်းနေပြီး အခုမှဖြစ်တာလား ...(ဖြစ်တာမကြာသေးဘူးဆိုရင် System Restore ပြန်လုပ်ပေးရင်ကောင်းသွားတတ်တယ်...အလွယ်ကူဆုံးပါဘဲ).. တင်ထားတာက Windows Vista လား ( Vista က တစ်ခါတစ်လေNetwork ကြိုးခဏလေးဖြုတ်မိတာကိုကြောင်ပြီး..) IP setting တွေ ပြန်ထည့်ပေးရတတ် တယ်... Network ကို များ Disable လုပ်မိသေးလား ... Virus တွေရော ... Update Defination ပုံမှန်လုပ်ထားရဲ့လား.. (တစ်ချို့တွေက..Network တွေကို .. sence လုပ်လို့မရအောင်လုပ်ထားတတ် တယ်)... (Ping ရော Ping ပြီးပြီလား).. Connector ခေါင်းတွေကို တစ်ခြား port တစ်ခုမှာ ပြောင်းတတ်ကြည့်ပြီးပြီလား .. (သေချာအောင်လို့ပါ).. ကိုယ့် ရဲ့ Network ကြိုးတွေတစ်လျှောက်ကို ... တစ်စုံတစ်ခုနဲ့များ .. အရမ်းဖိမိနေလို့လား ..(လွတ်ရဲ့လား.. Shield တွေကိုသတိထားပါ) ... နောက်ဆုံးမရရင်တော့ .. Network ကို Disable လုပ်ပြီးရင် Enable ပြန်လုပ်ကြည့် ... Network Driver Update လုပ်ကြည့် .. မရရင်တော့ .. Driver ပြန်တင်ကြည့် .. Network Configuration မှာ .. ရွေးထားတာတွေမှန်ရဲ့လား ... ပြန်ကြည့်.. ပြီးတော့ ... User permission ကို ပြောင်းကြည့်... အားလုံးကတော့ ဖြစ်နိုင်တာတွေချည်း ပါဘဲ... နောက်ထပ်လည်း အများကြီးဖြစ်နိုင်တာတွေရှိသေးတယ် .. ဒါပေမဲ့ .. ဒီဟာနဲ့အရင်စမ်းကြည့်လိုက်ပါဦး... အဆင်ပြေမှာပါ..
ကျွန်တော် သေချာသုံးပါမယ်ဆိုတဲ့ စက်မှာမှ Network က လုံး၀ကိုမရှိဘူးဗျာ ...
network connection မှာ ဘာမှ မရှိိဘူးဆိုရင် devicemanager မှာ သွားစစ်ကြည့်ပါ
network adapter မှ disable ဖြစ််နေသလား/ unsupport(အ၀ါရောင် ?) ဖြစ်နေသလား အရင်စစ်ပါ
တစ်ခုခုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ သက်ဆိုင် Driver ကို update လုပ်ဖို့လိုပါတယ်
အခုက Network Connections မှာ ဘာ Network တစ်လုံးမှကို မတွေ့တာဗျ ... ဘယ်လိုမှ Createanew connetion လုပ်လို့မရဘူး ..
device manager ထဲမှ အားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီဆိုရင် ပုံမှန်အရ network connection မှာ ကွန်ပျူတာနှစ်လုံးနဲ့ icon ပုံလေးပေါ်ပါတယ်
ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ .... Window လည်း ပြန်မတင်ချင်ဘူး .. (ပြန်တင်ရမှာ ပျင်းလို့ ..:D) လွယ်မယ်လို့တော့ ထင်ပါတယ် ... ကျွန်တော်ကလည်း တော်တော်လေးကို ပိန်းတဲ့ကောင်မို့လို့ပါဗျာ ... နည်းနည်းလောက်တော့ ဖြေရှင်းပေးကြပါဦးနော်
Createanew connetion လုပ်တာက Dial connection/Incoming connection /vpn စတာတွေကို setup လုပ်ချင််ရင်သာ Createanew connetion ကို ကလစ်ပြီး လုပ်သွားတာပါ
မိမိ network အတွင်းမှာရှိကြတဲ့ ကွန်ပျူတာတွေနဲ့ Workgroup ဖြစ်ချင််ရင်တော့ setupahome or small office network ကို ကလစ်ပြီး netwrok setup လုပ်ရပါ့မယ် ပြီးရင် restart ချလိုက်ပါ ပြန်တက်လာရင် အဆင်ပြေသွားနိုင်ပါတယ်
ကျွန်တော်ကတော့..registry ထဲက.network နဲ့ဆိုင်တဲ့.ဟာတစ်ခု(မမှတ်မိ)..ကို ဖျက်လိုက်မိတယ်..
နောက် ncpa.cpl လို့ရိုက်ကြည့်ရင်.. ဘာမှမပေါ်တော့ပဲနဲ့
"Network folder is empty and unable to retrieve...." ဆိုပြီးပဲ.ပေါ်နေတယ်..
နည်းနည်းရှင်းအောင်ပြောပေးပါလား.... ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတာ... မေးတဲ့သူရှင်းမှ
ဖြေတဲ့သူတွေမလည်မှာ.... ညီဟာ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ.... workgroup မှာတွေတာလား.... Hardware ပြသနာလား.... switch ပြသနာလား ..... နည်းနည်းရှင်းအောင်ပြောဦးနော်... ကျွန်တော်တို့ နက်ေ၀ါ့သမားဖြစ်လာရင် ပြသနာကို မိုးမလင်းခင် ဖြေရှင်းနိုင်အောင် လုပ်ကြရမယ်.................. အနီးစပ်ဆုံးဟာလေးပြောနော် ညီ
အခုဟာက workgroup လုပ်ချင်တာဗျ ... ဒါပေမယ့် တစ်ခုမှ လုပ်မရလို့ ညစ်နေတာ ... ကျွန်တော်ကလည်း ရှင်းအောင်မပြောတတ်တော့ ပိုရှုပ်ကုန်ပြီ ... Set upahome or small office network လည်း အသစ်လုပ်လို့မရဘူးဗျ ... Device Manager မှာလည်း ကတ်ကိုတွေ့တယ်ဗျ ... Error လည်းမပြဘူး ...
Workgroup ပဲလုပ်လို့မရတာလား ?
Workgroup လုပ်ချင်တာ က လုပ်ချင်တဲ့ PC က MyComputer-->Properties -->Computer Name-->Change -->Workgroup မှာ တခြား Computer တွေနဲ့ Workgroup Name တူအောင်ပေးရုံပဲလေ......ဟုတ်ဖူးလား ဒါဆိုရင်တွေ့လောက်ပါတယ်.....:5:
ဒါမှမဟုတ် ဘာ Connection မှကို မရတာလား?
အခုက စက်တွေ အကုန်လုံးက Network က တက်တယ်ဗျ ... ကျွန်တော် သေချာသုံးပါမယ်ဆိုတဲ့ စက်မှာမှ Network က လုံး၀ကိုမရှိဘူးဗျာ ...အခုက Network Connections မှာ ဘာ Network တစ်လုံးမှကို မတွေ့တာဗျ ...
Network Connection ထဲမှာ Local Area Connection ဆိုတာရှိလာကြည့်ကြည့်ပါ.... အဲဒါမရှိဘူးဆိုရင် Network Driver ပျောက်နေတာပါ.... Network Driver ကိုပြန်တင်လိုက်ရင်ကောင်းသွားပါတယ်.... Local Area Connection မရှိဘူးဆိုရင်ဘာမှကို Connect မလုပ်ပါဘူး....
ဘယ်လိုမှ Createanew connetion လုပ်လို့မရဘူး ...
Createanew connection ဆိုတာက WAN အတွက်ပါ အကိုလုပ်ချင်တဲ့ workgroup (LAN) အတွက်မဟုတ်ပါဘူး.... workgroup အတွက်ဆို Createanew connection လုပ်စရာမလိုပါဘူး....
Local area connection ရှိတယ်ဆိုရင် workgroup ကိုပြန်စစ်ကြည့်ပါ.... အာလုံးမှန်တယ်ဆိုရင်တော့ Network Cable ကိုလဲ ပြီးတော့စမ်းကြည့်ပါ.... တစ်ခါတစ်လေ Network ကမီးလင်းတယ်ဆိုပင်မဲ့ Network ခေါင်းထဲကကြိုးတွေလဲလွတ်တတ်ပါတယ်... ကျွန်တော်တစ်ခါဖြစ်ဘူးလို့ပါ.... မီးလင်းပြီး connection မရဘူးဖြစ်နေလို့လိုက်ရှာလိုက်ရတာ ကြိုးလဲလိုက်တော့ အဆင်ပြေသွားပါတယ်...... အဆင်ပြေပါစေဗျာ....
အခုက LAN ချိတ်ချင်တာပါ ... LAN ချိတ်လို့ရအောင် ဘယ်လိုနည်းနဲ့ လုပ်ရင် ရမလဲပေါ့နော် .. ကျွန်တော်လည်း နည်းမျိုးစုံလုပ်ပြီးပြီ .. မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျ ...
အဲဒါဆိုရင်လည်း Network Driver လေး ရှိရင် Share ကြပါဦး ... Network Driver တင်ပြီး စမ်းကြည့်လိုက်မယ် ... နောက်ဆုံး မရရင်တော့ Format ဆိုတဲ့ လမ်းစဉ်ကိုပဲ ရွေးရတော့မှာပေါ့ ..:((:((:((
အကိုရေ Network Driver Share တာက လွယ်ပါတယ်
အကိုက Network ကို card စိုက်ထားတာလား
onboard လားဆိုတာလေး ပြောပြပါလား
onboard ဆိုရင်လဲ model no. လေးပြောပြနော်
ကျွန်တော့်ဟာကတော့ Compaq ပါ ... ဒါပေမယ့် နည်းနည်းတော့ Model အောက်နေပြီ .... ၂၀၀၄ လောက်တုန်းက စက်ပေါ့ ... အဲဒါကြီးကို ဘယ်ပို့ရင်ကောင်းမလဲလို့ စဉ်းစားနေတယ် ... :D .. အဆင်ပြေနိုင်ရင်တော့ ကြိုးစားပေးကြပါဦး